Antananarivo Renivohitra : Hahazo famatsian-drano 200 000 m3 isan’andro -
AccueilSosialyAntananarivo Renivohitra : Hahazo famatsian-drano 200 000 m3 isan’andro
Antananarivo Renivohitra : Hahazo famatsian-drano 200 000 m3 isan’andro
10/08/2018 admintriatra Sosialy 0
Tanteraka ny fanambin’ny Fitondram-panjakana amin’ny fampitomboana ny fanomezan-drano fisotro madio an’Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina.
Efa miasa ary efa mamokatra mantsy ilay tobim-pamokarana sy famatsiana rano fisotro madio eny Mandroseza sy eny amin’ny Kaomina Soalandy Ankadivoribe, distrikan’Atsimondrano.
Ho an’ny etsy Mandroseza manokana, dia miainga avy ao ny famatsiana ny rano ho an’Antananarivo Renivohitra. Raha namokatra 180 000 m3 isan’andro izany tany aloha, nitombo ho 200 000 m3 isan’andro ny famokarana ankehitriny noho io tobim-pamokarana vaovao io. Nambaran’ny minisitry ny Angovo, Lantoniaina Rasoloelison, fa mifandanja tsara, araka ny filan’ny mponin’Antananarivo Renivohitra ny famokarana. Voalaza fa mifanaraka amin’ny tolotra ihany koa ny kalitao satria manaraka ny fenitra takiana izany. Marihina fa toby lehibe sady mamokatra no manadio ary mamatsy ny etsy Mandroseza.
Ankoatra izay, ho an’ny Kaomina Soalandy Ankadivoribe indray, ny reniranon’i Sisaony no sintonin’ilay tobim-pamokarana ary mandalo ao amin’ilay tobim-pamokarana sy fanadiovana izany. Voalaza fa manadio rano 120 m3 isan’ora kosa io toby vaovao io. Avy eo indray, mameno ilay fitehirizan-drano goavana ao Iavoloha, ary miainga avy eo ny fitsinjarana sy ny famatsiana. Raha ny fanazavana hatrany, dia tafapetraka ihany koa ny fantsona mpitsinjara ny rano madio izay mirefy hatrany amin’ny 4 800 m. Olona miisa 50 000 kosa no hahazo famatsiana avy amin’ity tobim-pamokarana vaovao ity, ary misitraka izany avokoa ny ao Iavoloha, Mandrimena, Amboanjobe ary Ankadivoribe…
Ankoatra izay, mitentina 5 Miliara Ar mahery ny nananganana io fotodrafitrasa ao Ankadivoribe io ka ny 60%-n’izany dia avy amin’ny Fanjakana amin’ny alalan’ny orinasa Jirama ary ny 30% kosa avy amin’ny Fanjakana Britanika amin’ny alalan’ny UKaid.
Noho izay indrindra, dia hisy ny fanitarana ireo paompin-drano amin’ireo kaomina maromaro mandrafitra ny distrikan’Atsimondrano sy ny fanomezana rano amin’ireo tokantrano manao fangatahana.
Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ataon’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Omaly mantsy, dia nitokana ny fotodrafitrasa ho an’ny zandary “poste avancée” tao amin’ny kaominina Manakambahiny Andrefana, Faritra Alaotra Mangoro, ny Filohan’ny Repoblika. Vahoaka marobe no tonga ...Tohiny